Imaaradka Shaaciyay waxa uu Qabanaayo Sarkaal ay Somaliland usoo magaacaben, – KHAATUMO NEWS
Imaaradka Shaaciyay waxa uu Qabanaayo Sarkaal ay Somaliland usoo magaacaben,
Warbaahinta Dalka Imaaraadka Carabta, ayaa wax ka qortay Wakiil Dawladda Imaaraadka Carabtu u soo Magacowday Maamulka Somaliland, kaasi oo Toddobaadkan uu Muuse Biixi Cabdi ka guddoomay Waraaqaha Aqoonsiga.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Ciidankii Qaban laha Ceerigaabo oo Puntland Soo Bandhigtay,
Next Post: War Deg Deg Ah::Kenya Oo Ka hadashay Fashilka Ka Raacay Maxkamada Heeg,
Waxaad u fikiraysaa si qaldan oo qabiilaysan. Ma waxa Soomaali ka cararaya Somalilnad oo iyada oo awoodda in ay dall gooniya noqoto 26/6/1960 si bilaa shuruud ah uugu dartay xorriyadeedii dalka Somaliya ee ay ka hor xoroowday mis Soomaaliyada ilaa maanta diidan in aqoonstao dawladnimada jamhuuriyadda Somaliland. Mise ma kala tqaanid dalka Somalialnd, Jabuuti iyo dalka saaqiday ee Soomaaliya.
Warqada horta ma wada akhriseen? Hhhhhhh
Waxa ku qoran waxaanu xoojinayna xidhiidhka iyo danaha ka dhaxeeya labada wadan iyo labada qaran ee somaliland iyo imaaraadka! Hhhhhh ereyga culus bay adeegsatay wasaarada arrimaha dibada ee UAE! Hhhhhh
Waa yaabayay idoor baa maqaam sare
Imaradku ku qabilayaan.
Xafiskinaa gacanac siga ku qanac sanada.
Somalia safer buxa ayaa u joga imaradka.
Wax ha u tarto somali ka cararku.
Danyaarta caqli dhanta.